Izmir ရှိ Mukhtars သို့အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - RayHaber
[29 / 10 / 2019] ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ 96 ။ မင်္ဂလာနှစ်သစ်ကူး	အထွေထွေ
[29 / 10 / 2019] ဆောက်လုပ်ပြီးစီးဆဲနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိန်းများပြီးစီးခဲ့သည်	03 Afyonkarahisar
[29 / 10 / 2019] ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်မြန်နှုန်းရထားလိုင်း	လောက
[29 / 10 / 2019] သံပိုးလမ်းမကြီး 275 တန်ချိန်ထောင်နှင့်ချီသည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[29 / 10 / 2019] 58 နှစ်ရှိတူရကီ၏ပထမဦးဆုံးပြည်တွင်းမော်တော်ယာဉ်တော်လှန်ရေးတွင်	26 Eskisehir
[29 / 10 / 2019] Bayburt အုပ်ချုပ်ရေးမှူးCüneyt Epcim မီးရထားဖော်ပြချက်	69 Bayburt
[29 / 10 / 2019] သမ္မတနိုင်ငံနေ့ကြောင့်အစ္စတန်ဘူလ်တွင် Metro Flights တိုးချဲ့ခဲ့သည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[29 / 10 / 2019] သမ္မတနိုင်ငံနေ့၌အစ္စတန်ဘူလ်တွင်အခမဲ့အင်တာနက်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[29 / 10 / 2019] မွန်ဘိုင်း Ahmedabad ကျည်ဆံရထားစီမံကိန်း	91 အိန္ဒိယ
[29 / 10 / 2019] အိန္ဒိယမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းကြောင်းမြေပုံ	91 အိန္ဒိယ
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ35 IzmirIzmir ရှိ Mukhtars သို့အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
20 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 35 Izmir, ရထားလမ်း, တူရကီ Aegean ကမ်းခြေ, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Metro, တူရကီ, ဓါတ်ရထား 0
izmir အတွက် muhtars မှအခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး mujta
IzNM မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer၊ 1 နိုဝင်ဘာပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် mukhtars များအတွက်ကြေငြာခြင်းအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
Nzmir Metropolitan မြူနီစီပယ်က 2015 ကတည်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ Mukhtar's Day ကိုကျင်းပခဲ့ပြီး၊ 1 ropolzmir Metropolitan Municipality မှTunç Soyer ၏ပြောကြားချက်အရ public ဇmirတွင်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် 2019 ၏နေ့စွဲအနေဖြင့် muhtars သို့အခမဲ့ဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ “ မင်းကဒီမိုကရေစီရဲ့ကွင်းဆက်ထဲမှာပထမဆုံးချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်ဟာဒေသခံပြည်သူများနှင့်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအကြားဆက်နွယ်မှုကိုထူထောင်ရန်အရေးကြီးဆုံးသောနေရာတွင်ရှိသည်။ ငါတို့ရပ်ကွက်များနှင့်ကျေးရွာများ၏ဘုံလိုအပ်ချက်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုပြန်လည်ရှင်သန်လာစေရန်နှင့်ပြည်သူများကိုမှန်ကန်သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အရေးအကြီးဆုံးရဲဘော်ရဲဘက်များဖြစ်သည်။
Tunç Soyer ကသူ၏လုပ်ဆောင်ချက်သည်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အလွန်အရေးကြီးကြောင်းအလေးအနက်ပြောကြားခဲ့သည်။ Dan Izmir Metropolitan Municipality ၏မြို့တော်ဝန်ဖြစ်လာသည့်နေ့မှ စ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ပြသထားသောပြproblemsနာများနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်အဖြေရှာရန်ကြိုးစားနေသည်။ ကျနော်တို့ကခရိုင်မှာပထမဆုံးနေ့ကစပြီး 30 headman နဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။
Tunc Soyer မှပြောကြားသည်မှာဒေသခံဒီမိုကရေစီ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ပြည်သူလူထု၏ဆန္ဒများနှင့်တိုင်ကြားမှုများကိုစောင့်ဆိုင်းခြင်းသည်မသင့်တော်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ငါတို့၏လူများနှင့်ပြည်သူများသည်စည်ပင်သာယာရေးဂိတ်တွင်စောင့်နေကြတော့မည်မဟုတ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းရုံးစီမံကိန်းကြောင့်မင်းတို့ရပ်ကွက်ထဲကိုဗျူရိုကရက်တွေလာပြီးမင်းရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုနားထောင်ပြီးပြproblemsနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ ” Tunç Soyer က ၄ င်းတို့သည်ရပ်ကွက်များနှင့်သူတို့၏ပြproblemsနာများကိုအကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံးသိသူများဖြစ်ပြီး“ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းကရပ်ကွက်ထဲမှာအကောင်းဆုံးကိုသိပြီးဖြေရှင်းချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေးအမြင်အရှိဆုံးပါ။ ထို့ကြောင့် Izmir Metropolitan Municipality အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်တို့၏လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင်နောက်လာမည့်4နှင့်နှစ်ဝက်ခွဲဝန်ဆောင်မှုကိုသင်နှင့်သင့်လမ်းကြောင်းပေါ်မှရယူရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ ”
သူတို့ကTunç Soyer ကိုစာအုပ်တစ်အုပ်ပေးခဲ့တယ်
အစ်ဂျီးယန်းဒေသကြီးစားနပ်ရိက္ခာ Mukhtar အသင်းချုပ်မှာစကားပြောသောနိုင်ငံတော်သမ္မတ Zeynep တေလာကျနော်တို့တူရကီတွင်အကြီးဆုံး ailesiyiz ရှိပါတယ် "ဟုပြောသည်။ ကျွန်တော်တို့မှာ 187 တစ်နှစ်ရှိခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်တစ်ရက်မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ ချစ်ခင်ရပါသော ငါကိုဖိတ်ကြားပြီးဒီအခွင့်အလမ်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Izmir Mukhtars အသင်းဥက္ကဌ Hasan Baykal က မင်းတို့အားလုံးကိုမင်းကိုချီးကျူးပါတယ် ကျွန်ုပ်၏မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer၊ လေးစားရသောစည်ပင်သာယာဗျူရိုကရက်နှင့်ခရိုင်မြို့တော်ဝန်များကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Url ၏မြို့တော်ဝန်များသည်သမ္မတ Soyer အားညစာမတိုင်မီစာအုပ်အပြည့်နှင့်တောင်း ၂- ခုပေးခဲ့သည်။ Karşıyaka Mukhtars အစည်းအရုံး၏ဥက္ကLe္ဌ Levent Güçlüနှင့် Izmir Mukhtar ၏အသင်းဥက္ကPresident္ဌ Hasan Baykal တို့သည်သမ္မတ Soyer အားပန်းပွင့်များပေးအပ်သည်။
မိန့်ခွန်းများအပြီးတွင်နို ၀ င်ဘာလကစပြီးအခမဲ့ခရီးသည်ကဒ်ပြားကိုအသုံးပြုမည့်သူနှစ် ဦး သည် Izmir Metropolitan Municipality Municipal Tunç Soyer ထံမှသူ၏ကဒ်များကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
Izmir အတွက်မြို့တော်ဝန်မှအခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 11 / 07 / 2019 Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, မြို့အကြီးအကဲအလုပ်လုပ်ဘို့အလုပ်ချိန်အတွင်းမှာအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခမဲ့ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ Izmir အတွက် 1294 အကြီးအကဲရက်အပေါ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနာရီအတွင်းအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခမဲ့အသုံးပြုမှုကိုပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကောင်စီဘတ်စ်ကားများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီ, မက်ထရို, လမ်းရထားထဲမှာတွေကတော့ရွာတွေကို, ကူးတို့ဟာခရီးသည်ရထားပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲစီးနိုင်ပါတယ်။ အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖုိ့ရန်သူတို့၏ဝိသေသလက္ခဏာကတ်များပြသနိုင်ဖို့လုံလောက်ပေ။ နှောင်းပိုင်းတွင်သောနေ့ရက်အတွက် Izmir တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer ဖွငျ့ဖျောပွထားသပါလီမန်အလေ့အကျင့်အတွက် Gultepe အတွက်ရပ်ရွာသူကြီးများနှင့်တွေ့ဆုံမှာတညီတညွတ်တည်းအတည်ပြုခဲ့ခဲ့သည်။ Izmir တွေကတော့ရွာတွေကိုအခမဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်တာဝန်များကိုကာလအတွင်းအကြိုးရှိနိုငျသညျ။
Gaziantep Mukhtar မှဓါတ်ရထားဝငျကမျြး 14 / 05 / 2014 Gaziantep Mukhtar မှဓါတ်ရထားဝငျကမျြး: အ Gaziantep တဲ့ Metropolitan Mukhtar ၏လမ်းရထားယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားကောင်စီတွေကတော့ရွာတွေကိုများအတွက်အရေးပါသောပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်တက် လာ. g'und Gaziantep မြို့တော်ကောင်စီတွေကတော့ရွာတွေကိုများအတွက် g'und အရေးပါသောပြဿနာတက်ရောက်လေ၏။ မရှိတော့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခမဲ့စီးနိုင်ပါတယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူကောင်စီတွေကတော့ရွာတွေကိုဆိုလိုသည်။ Gaziantep မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဌာနဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Osman ရွှံ့, 14 အစီအစဉ်အပေါ် Metropolitan မြူနီစီပယ်ကောင်စီအစည်းအဝေးကဦးဆောင်။ ပစ္စည်းဥစ္စာအများပြည်သူအဖွဲ့အစည်းများ၏ခရိုင်တွေကတော့ရွာတွေကို၏နယ်နိမိတ်အတွင်းနှင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသူတို့အဖွဲ့အစည်းများပိုမိုလျင်မြန်စွာနှင့်ထိထိရောက်ရောက်ဝန်ဆောင်မှုနိုင်ဒါမြှို့နယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ်များကို၎င်း, ဘာသာရပ်ဆှေးနှေးခဲ့ပေးထား '' အခမဲ့ခရီးသွားကဒ် '' သက်ဆိုင်သောလမ်းရထားထဲမှာငါတို့မွို့။ အစီအစဉ်ကို item ...
အဆိုပါအကြီးအကဲဖို့ Izmir တဲ့ Metropolitan အဓိပ္ပါယ်ရှိသောလက်ဆောင်တစ်ခု 09 / 01 / 2017 အဆိုပါİzmirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်၏အကြီးအကဲဖို့ Izmir တဲ့ Metropolitan အဓိပ္ပါယ်ရှိသောလက်ဆောင်မြို့ပြခရိုင်တွေကတော့ရွာတွေကိုအပြင်ဘက် 19 ၏ကျန်တစ်ဦးသိသိသာသာနှစ်သစ်ဆုကြေးဇူးကိုစလှေတျတျောမူပြီ။ Ataturk ၏ 908 ရပ်ကွက်အတွင်းအဆိုပါမြို့ပြပုံတူတစ်ခုအံ့သြစရာများအလွန်ပျော်ရွှင်အကြီးအကဲခဲ့ကြသည်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်ရပ်ကွက်ရုံးကနေဆွဲထားကြ၏။ အဆိုပါဖြန့်ဖြူးဖျော်ဖြေတဲ့သူ Mustafa Kemal Ataturk ရဲ့ပုံတူအစဉ်အမြဲဖြစ်ပြီးဦးခေါင်း၏ရုံးခန်းထဲမှာနေရာတစ်နေရာထောင့်နှင့်ရပ်ရွာသူကြီးများပြောနေကြပါတယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း, ထိုမြို့တော်မြူနီစီပယ်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Mukhtar Bingöllü၏ Viaduct တောင်းဆိုချက်အရ 29 / 03 / 2013 Bingol တွေကတော့ရွာတွေကိုအစည်းအရုံးကသမ္မတအဗ္ဗဒူလာ butane, မြို့နှစ်ဖက်၏ချိတ်ဆက်မှုကိုခွင့်ပြုခြင်းနှင့်ယာဉ်ကြောမတော်တဆမှုများနှစ်စဉ်များစွာအစားÇapakçurဖြစ်ပွားခဲ့သည်တစ် viaduct တံတား၏အမှုကိုပြုသင့်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ အသင်း၏ 13 ရပ်ကွက်အတွင်းအကြီးအကဲတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှင့်အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌဆယ်စုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကတိတော်များတည်ရှိပြီးအချို့ရပ်ရွာသူကြီးများ butane ၏ကိုယ်စားပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကြေညာချက်တွင်စေ့စပ်, ဒါပေမယ့်တစ်နည်းနည်းနဲ့Çabakçurမဖွစျနိုငျတဲ့သူတွေကတော့ရွာတွေကိုက viaduct အောင်၏ Bingol များအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောလိုအပ်ချက်ကြောင်းအစားတံတားကဆိုသည်။ Bingol ငလျင်နှင့်မြို့၏ဗဟိုထက်ဝက်ကာလ၌ဖြစ်နိုင်သမျှသဘာဝဘေးအန္တရာယ်၏အကြောင်း, အခြားတစ်ဝက်Düzagaçအာရုံစူးစိုက်မှု၌တည်နေပါလိမ့်မယ်နေစဉ် ...
အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရိုက်ထည့်မည်သူ KPSS စာမေးပွဲတွင်ဝငျကမျြး 29 / 06 / 2018 တူရကီရဲ့အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်အစိုးရအရာရှိများ Bursa တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Alinur Aktas နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းကြောင်းဖျော, လူငယ်များတူရကီမယုံသင့်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Aktas, အ KPSS စာမေးပွဲတွင်၏နေ့ဝင်အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထောက်ခံမှုပေးတော်မူလတံ့သောသူကြေညာခဲ့သည်။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး, ပြည်ထောင်စုဖောင်ဒေးရှင်းမှပညာသင်ဆုပူးတွဲအကယ်ဒမီကစီစဉ်ဘဏ်ခွဲ, Bursa ဌာနခွဲလူငယ်အစည်းအရုံးနှင့် Pegem '' KPSS သင်တန်းစခန်း '' အစီအစဉ်အတွက် Merinos Atatürkကွန်ဂရက်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုစင်တာ (Merino AKKM) စတင်ခဲ့ပါတယ်။ မြို့တော်မြို့တော်ဝန် Alinur Aktas လူငယ်များနှင့်ပညာရေးဘဝ၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုပြောပြသည်အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ခဲ့။ ကြောင်းအရာရှိတဦးကထင်ဘယ်တော့မှမနိုင်ငံတော်သမ္မတ Alinur အထူးတစ်ဘဏ္ဍာရေးအတိုင်ပင်ခံသင်တန်း, ဖြစ်လာ၏အိပ်မက်ပြီးပါကဖြင့်၎င်း၏ဦးတည်ရာကိုရောက်ရှိပြောကြားခဲ့့သည်က ...
Gaziantep Mukhtar မှဓါတ်ရထားဝငျကမျြး
အဆိုပါအကြီးအကဲဖို့ Izmir တဲ့ Metropolitan အဓိပ္ပါယ်ရှိသောလက်ဆောင်တစ်ခု
Mukhtar Bingöllü၏ Viaduct တောင်းဆိုချက်အရ
အဆိုပါတူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းကို၏ဧဝံဂေလိတရားကိုခံရသောပွဲ! Register လုပ်ဖို့ Free!
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (564) စက်တင်ဘာလ 2019 (558) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (503) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1076) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (971) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (547) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (905) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1167) အောက်တိုဘာလ 2012 (829) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (860) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (562) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (11) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)
Hyundai Assan Technicians များအောင်မြင်မှုထပ်မံရရှိ